Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Gambling Papa
1 Xeerka guud ee ilaalinta xogta (GDPR)
2 Faylasha gal
3 Kukiyada iyo nalalka websaydhka
4 Wada-hawlgalayaashayada xayeysiinta
5 Siyaasadaha Asturnaanta
6 Siyaasadaha asturnaanta xisbiga saddexaad
7 Macluumaadka carruurta
8 Qaanuunka arrimaha khaaska ah ee khadka tooska ah
9 Codso in la tirtiro xogta
At Gambling Papa, oo laga heli karo https://gamblingpapa.com/, mid ka mid ah ahmiyadeena ugu muhiimsan waa asturnaanta martidayada. Dokumentigan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu ka kooban yahay noocyo macluumaad ah oo la ururiyey oo la duubay Khamaarista Papa iyo sida aan u isticmaalno.
Haddii aad qabtid su’aalo dheeraad ah ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Nidaamkeenna Khaaska ah, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Siyaasadeena Qarsoodiga ah waxaa lagu soo saaray iyadoo la kaashanayo Soo Saaraha Qaanuunka Arrimaha Gaarka ah ee GDPR ee ka socda GDPRPrivacyNotice.com
Xeerka guud ee ilaalinta xogta (GDPR)
Waxaan nahay Maamulaha Macluumaadkaaga.
Khamaarista Aasaaska aasaasiga ah ee ururinta iyo adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ee lagu sharraxay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay kuxirantahay Macluumaadka Shakhsiyeed ee aan ururinno iyo macnaha guud ee aan ku uruurinayno macluumaadka:
Khamaarista Papa wuxuu u baahan yahay inuu qandaraas kula galo adiga
Waxaad siisay rukhsad Papa inaad sidaas samayso
Ku shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed waxay ku jirtaa Khamaarka Papa danaha sharciga ah
Khamaarista Papa wuxuu u baahan yahay inuu u hoggaansamo sharciga
Khamaarka Papa wuxuu hayn doonaa macluumaadkaaga shaqsiyeed ilaa inta lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waan hayn doonnaa oo u adeegsan doonnaa macluumaadkaaga illaa inta lagama maarmaanka u ah u hoggaansamida waajibaadkayaga sharci, xallinta khilaafaadka, iyo hirgelinta siyaasadahayaga.
Haddii aad degan tahay Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA), waxaad leedahay xuquuqaha ilaalinta xogta qaarkood. Haddii aad rabto in laguu sheego waxa Macluumaadka Shakhsi ahaaneed ee aan kaa hayno adiga iyo haddii aad rabto in lagaa saaro nidaamyadeena, fadlan nala soo xiriir.
Xaaladaha qaarkood, waxaad leedahay xuquuqda soo socota ee ilaalinta macluumaadka:
Xaquuqda helitaanka, cusboonaysiinta ama tirtirka macluumaadka aan adiga kugu hayno.
Xaquuqda xog uqaadida xogta ​​li>
Xuquuqda ka noqoshada ogolaanshaha
Khamaarka Papa wuxuu raacayaa nidaamka caadiga ah ee adeegsiga faylasha galka. Faylashaani waxay galiyaa martida markay booqdaan boggaga internetka. Dhammaan shirkadaha martigelinaya waxay sameeyaan tan iyo qayb ka mid ah martigelinta adeegyada ‘falanqaynta. Macluumaadka lagu ururiyey faylasha log waxaa ka mid ah cinwaanada borotokoolka internetka (IP), nooca biraawsarka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), taariikhda iyo waqtiga shaabadda, bogagga tixraaca / bixitaanka, iyo suurtagalnimada tirada qasabadaha. Kuwaani kuma xirna wax macluumaad ah oo shaqsi ahaan la aqoonsan karo. Ujeedada macluumaadku waa falanqaynta isbeddellada, maamulka goobta, la socoshada dhaqdhaqaaqa isticmaalayaasha websaydhka, iyo ururinta macluumaadka dadka.
Kukiyada iyo nalalka websaydhka
Sida degel kasta oo kale, Khamaarka Papa wuxuu adeegsadaa ‘cookies’. Kukiyadaas waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo macluumaadka ay ka mid yihiin dookha booqdayaasha, iyo bogagga ku yaal websaydhka booqdaha booqday ama booqday. Macluumaadka waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo khibrada isticmaaleyaasha iyadoo la waafajinayo waxyaabaha ku jira boggayaga ku saleysan nooca biraawsarka booqdayaasha iyo / ama macluumaad kale.
Macluumaad guud oo dheeraad ah oo ku saabsan cookies, fadlan akhri “Waa maxay Kukiyada” .
Qaar ka mid ah xayeysiistayaasha boggayaga ayaa isticmaali kara ‘cookies’ iyo shabakadaha internetka. Wada-hawlgalayaashayada xayeysiinta ayaa hoos ku taxan. Mid kasta oo ka mid ah la-hawlgalayaashayada xayeysiinta waxay leeyihiin Siyaasad Khaas ah oo u gaar ah siyaasaddooda ku saabsan xogta isticmaalaha. Si loo helo marin fudud, waxaan iskuxiraynay Xeerarkooda Khaaska ah ee hoose.
Waxaad la tashan kartaa liiskan si aad uga hesho Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah mid kasta oo ka mid ah la-hawlgalayaasha xayeysiinta ee Khamaarka Papa.
Ogsoonow in Khamaarka Papa uusan marin u lahayn ama uusan xakamayn karin cookies-yadaas ay adeegsadaan xayeysiiyeyaasha saddexaad.
Siyaasadaha asturnaanta xisbiga saddexaad
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Khamaarka Papa ma khuseeyo xayeysiiyeyaasha kale ama bogagga internetka. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato Xeerarka Qarsoodiga ah ee khuseeya xafiisyadan xayeysiinta ee dhinac saddexaad si aad u hesho macluumaad faahfaahsan. Waxay ka mid noqon kartaa dhaqankooda iyo tilmaamaha ku saabsan sida looga baxo xulashooyinka qaarkood.
Waad dooran kartaa inaad ka joojiso cookies-ka adoo adeegsanaya xulashada biraawsarkaaga shaqsiyeed. Si aad u ogaato macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maareynta cookie ee leh daalacashada shabakadaha gaarka ah, waxaa laga heli karaa bogagga internetka ee bog furayaasha.
Qeyb kale oo ahmiyadeena ayaa ah inaan ku darno ilaalinta carruurta inta aan isticmaaleyno internetka. Waxaan ku dhiiri galinaynaa waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah inay ilaaliyaan, kaqeyb galaan, iyo / ama inay kormeeraan oo hagaan wax qabadkooda internetka.
Khamaarista Papa si ogaal la’aan ah ugama soo qaato wax Macluumaad Aqoonsi Shakhsi ahaaneed carruurta da’doodu ka yar tahay 13 jir. ka saar macluumaadka noocaas ah diiwaankayaga.
Qaanuunka arrimaha khaaska ah ee khadka tooska ah
Qaanuunkayaga Khaaska ah wuxuu khuseeyaa oo keliya waxqabadyadayada internetka wuxuuna u ansax yahay booqdayaasha boggayaga internetka marka la eego macluumaadka ay wadaagaan iyo / ama ay ku ururiyaan Khamaarka Papa. Siyaasaddan laguma dabaqi karo wixii macluumaad ah ee laga soo uruuriyo qadka ama marinnada aan ka ahayn degelkan.
Codso in la tirtiro xogta
Waad codsan kartaa wakhti kasta oo xogtaada ah inaad adigu soo dejiso ama aad tirtirto, si fudud email noogu soo dir cinwaanka contact@gamblingpapa.com
Adoo adeegsanaya websaydhkayaga, waxaad halkan ku oggolaanaysaa Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo aad ku raacsan tahay shuruudihiisa.